Umaka: ipulatifomu ye-ecommerce | Martech Zone
Tag: yesikhulumi ecommerce
Subbly: Qalisa Insizakalo Yebhokisi Lakho Lokubhaliselwe Ngale Nkundla Yezokuxhumana
NgoMsombuluko, Ephreli 19, 2021 NgoMsombuluko, Ephreli 19, 2021 Douglas Karr
Intukuthelo eyodwa enkulu esiyibonayo ku-ecommerce ukunikezwa kwebhokisi lokubhalisa. Amabhokisi ababhalisile angumnikelo othakazelisayo… kusuka kuzinto zokudla, imikhiqizo yezingane, ukuphatha izinja… amashumi ezigidi zabathengi babhalisela amabhokisi okubhalisa. Ukuba lula, ukwenza ngezifiso, ubusha, ukumangala, ukukhetheka, kanye nentengo zonke izici eziqhuba ukuthengiswa kwebhokisi lokubhaliselwe. Kumabhizinisi we-ecommerce wokudala, amabhokisi okubhalisela angaba yinzuzo ngoba uguqula abathengi besikhathi esisodwa babe amakhasimende aphindayo. Imakethe yokubhalisa ye-eCommerce kufanelekile
IVolusion: Umakhi Wewebhusayithi We-All-in-One Ecommerce
NgoLwesibili, Januwari 12, 2021 NgoLwesibili, Januwari 12, 2021 Douglas Karr
Ipulatifomu yakwaVolusion's in-one yenza kube lula ukusetha isitolo sakho ngamaminithi. Ipulatifomu yabo yenza kube lula ukusebenzisa isitolo sakho, ukwamukela izinkokhelo zekhadi lesikweletu, ukugcina izinto noma ukuvuselela ukwakhiwa kwesiza sakho. Ipulatifomu yabo ye-ecommerce inika amandla abathengisi ukuthi bavuke basebenze ngesibonisi esihle somsebenzisi nezici ezinhle. Izici ze-Volusion's Ecommerce Builder Izici: Isihleli Sesitolo - Yenza ngokwezifiso ukubukeka nokuzwakala kwesayithi lakho ngamatimu aklanywe ngobunyoninco nomhleli wethu wesayithi onamandla.
I-KWI: I-CRM ehlanganisiwe, i-POS, i-Ecommerce kanye ne-Merchandising yabathengisi abakhethekile
I-KWI Unified Commerce Platform yisixazululo esisekelwe efwini, sokuphela kokugcina sabathengisi abakhethekile. Isixazululo se-KWI, esifaka phakathi i-POS, Merchandising, ne-eCommerce sinikwe amandla kusuka kudathabheyisi eyodwa, okunikeza abathengisi ulwazi olungenamthungo ngokuphelele, lwesiteshi se-omni. I-KWI Unified Commerce Platform Customer Relationship Management (CRM) - qoqa idatha ku-real-time, ngakho-ke zonke iziteshi zakho zinolwazi olusesikhathini. Abalingani bezentengiso bangabona isimo se-VIP, imicimbi ekhethekile enjengezinsuku zokuzalwa, imigubho nezinye izinto ezivusayo, ezigqanyiswe ku-POS to
Amathuluzi ahamba phambili wokukhangisa nge-imeyili weWoocommerce
NgoMsombuluko, Okthoba 26, 2020 NgoMsombuluko, Okthoba 26, 2020 USheryl Jones
I-Woocommerce yiyona ethandwa kakhulu futhi ngokusobala ingenye yama-plugins we-eCommerce amahle kakhulu we-WordPress. Kuyinto i-plugin yamahhala elula futhi eqondile ukusetha nokusebenzisa. Ngokungangabazeki indlela engcono yokuguqula iwebhusayithi yakho ye-WordPress ibe isitolo se-e-commerce esisebenza ngokugcwele! Kodwa-ke, ukuthola nokugcina amakhasimende, udinga okungaphezu kwesitolo se-eCommerce esiqinile. Udinga isu lokuthengisa le-imeyili elinamandla ukuze ugcine amakhasimende futhi uwaguqule abe